ရန်ဖြစ်တဲ့ မိဘ၊ စိတ်မရွှင်ပျတဲ့ ရင်သွေး(၁) – Healthy Life Journal
ရန်ဖြစ်တဲ့ မိဘ၊ စိတ်မရွှင်ပျတဲ့ ရင်သွေး(၁)
Posted on ဇူလိုငျ 1, 2018
မေး. မိဘနှစ်ပါးက ရန်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ရင် ကလေးငယ်တွေမှာ ဘယ်လိုစိတ်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသလဲဆရာ။ ကျွန်မတို့အိမ်နားမှာ မိဘနှစ်ပါး ရန်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းတွေရိုက်ခွဲကြ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရိုက်ကြနဲ့ ကလေးငယ်တွေခမျာငိုကြွေးကြတယ်။ သူတို့လေးတွေ ဘယ်လိုစိတ်ဒဏ်ရာရနိုင်ပါသလဲ။ သူတို့စိတ်ဒဏ်ရာသက်သာအောင် ဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ပေးလို့ရမလဲ။ သူတို့ဟာ ပုံမှန်အတိုင်း စိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာပါ့မလား။ ဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးသင့်ပါသလဲ။
ဖြေ. ဒေါ်မြတ်နှင်းရဲ့ မေးခွန်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားဖို့အတွက် မိသားစုအတွင်းအကြမ်းဖက်မှု (Domestic Violence) နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သိကောင်းဖွယ်ရာ အချက်အလက်တွေကို ရှေးဦးစွာဖော်ပြလိုပါတယ်။
(က) မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်ခြင်းဆိုတာ
အတူနေအိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက အိမ်သားတစ်ဦးဦးကို အနိုင်ယူနှိပ်စက်တာကို မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်။ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ အပြုအမူအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။ နှုတ်အားဖြင့် စော်စော်ကာကား ပြစ်တင်ဆဲဆိုတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျအောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ညှင်းဆဲအနိုင်ယူတာတွေက မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးကတော့ အနာတရဖြစ်အောင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာနဲ့ လိင်အဓမ္မပြုမူတာတို့ဖြစ်ပါတယ်။
(ခ) မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုအတိုင်းအတာ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမျိုးသမီးသုံးယောက်မှာ တစ်ယောက်ဟာ မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုဒဏ်ကို ခံစားနေရတယ်လို့ ကုလသမ္မဂ္ဂအမျိုးသမီးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အသတ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထဲမှာ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းက ခင်ပွန်း ဒါမှမဟုတ် အတူနေယောက်ျားရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် သေဆုံးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ မိန်းမ ၄ ယောက်မှာ တစ်ယောက်က အတူနေယောက်ျားရဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် အကြမ်းဖက်မှု ဒါမှမဟုတ် လိင်အဓမ္မပြုမှုကို ခံစားရတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်ပတ်အတွင်းမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အတူနေယောက်ျားရဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရကြောင်းသိရတယ်။ မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားရင် အကြမ်းဖက်ခံရသူ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ မိန်းမဖြစ်ပြီး ၃၀ရာခိုင်နှုန်းက ယောက်ျားဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အာရှတိုက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ယောက်ျားက ဇနီးသားမယားကို အကြမ်းဖက်နှုန်းက ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြည်သူလူထုအတွင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေကို တန်းတူသဘောမထားဘဲ ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်တဲ့ နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာ မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုနှုန်းများပြားပါတယ်။ ဆွေမျိုးသားချင်း မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာ ‘မိန်းမယူစ၊ ကြောင်သေမှ’ ဆိုတဲ့ အယူအဆမျိုးရှိရင် မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်တာကို အားပေးအားမြှောက်ရာရောက်ပါတယ်။
မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ တရားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာ မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုနှုန်းများပြားလာနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းရင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစုအတွင်းမှာ အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်မှုရှိရင် သားသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး၊ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ လူမှုရေးကိစ္စတွေကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်တာခံရရင် လမစေ့ကလေးမွေးဖွားတာနဲ့ မွေးဖွားလာတဲ့ ကလေးကိုယ်အလေးချိန် နည်းပါးတာတွေကို တွေ့ရှိရတယ်။ နို့တိုက်မိခင်ကို ရိုက်နှက်ရင် ရင်ခွင်ထဲက ကလေးငယ် မတော်တဆ ဒဏ်ရာအနာတရ ရရှိနိုင်တယ်။ မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုရှိရင် တစ်နှစ်သားကလေးငယ်ရဲ့ ကြီးထွားတိုးတက်မှုနှုန်းက နှေးကွေးလာတာတွေ့ရတယ်။ အငိုလွယ်တာ၊ စိတ်တိုလွယ်တာ၊ ၀မ်းပျက်လွယ်တာစတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုရှိရင် တစ်နှစ်သားကလေးငယ်ရဲ့ ကြီးထွားတိုးတက်မှုနှုန်းက နှေးကွေးလာတာတွေ့ရတယ်။ အငိုလွယ်တာ၊ စိတ်တိုလွယ်တာ၊ ၀မ်းပျက်လွယ်တာ စတဲ့လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်. . .
ကလေးကြီးတွေက မိခင်ကိုအကာအကွယ်ပေးမိလို့ မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါတယ်။ မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်တတ်သူဟာ သားသမီးတွေကိုလည်း ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုရှိရင် သားသမီးတွေမှာ အထွေထွေကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းလာတာတွေ့ရှိရတယ်။ ဥပမာ- အာဟာရချို့တဲ့တာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျတာ၊ အိပ်ရေးပျက်တာ၊ မောပန်းနွမ်းမယ်လွယ်တာ စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
အခုအထိ ဖော်ပြခဲ့တာကတော့ မိသားစုအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် သားသမီးတွေမှာ ဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာတချို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားမှာရရှိတဲ့ဒဏ်ရာက အနာကျက်လွယ်ပါတယ်။ အချိန်နဲ့အမျှ အမာရွတ်က ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သားသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် “ဖိစီးမှုဒဏ်ရာ”ကတော့ ကျက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ရေရှည်အမြစ်တွယ်နေတတ်ပါတယ်။
Related Items:Family, Featured, kid, mental care